ထုံဆေးမေ့ဆေးသုံး သွေးထိန်းသိမ်းနည်းလမ်းများ | နားနှင့် လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်—ဦးခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းခွဲစိတ်မှု
နားနှင့် လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်—ဦးခေါင်းနှင့် လည်ချောင်းခွဲစိတ်မှု
Comparison of surgical conditions during propofol or sevoflurane anaesthesia for endoscopic sinus surgery. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Br J Anaesth 2008;100(1):50-4.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 17982167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982167 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Anesthetic considerations for orthognathic surgery with evaluation of difficult intubation and technique for hypotensive anesthesia. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Anesth Prog 2000;47(4):151-6.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 11432182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11432182 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
Is it safe to decrease hemodynamic parameters to achieve bloodless surgical field during transnasal endoscopic procedures? Our experience in fifteen patients. (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)
ရင်းမြစ်‎: Clin Otolaryngol 2013;38(4):326-9.
Index လုပ်ထား‎: PubMed 23441624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23441624 (window အသစ် ဖွင့်နေပါတယ်)